Mhinduro Mubvunzo uye Mhinduro dzeIIT Exam 2017 - ITS Tech School
ITIL Exam 2017 - Mhinduro Mubvunzo uye Mhinduro
ITIL urongwa hwemigadziro yehutungamiri hwehutano hweH IT inogadzirisa utsi hweT IT nezvinodiwa zvebhizimisi. Kuziva rudiments ye ITIL iri nenzira iyi inonyanya kukanganisa kushamwaridzana. ITIL certification inozivikanwa nenyanzvi dzine rudiments ye ITIL nekushandiswa kwayo. Heano mamwe muenzaniso mibvunzo uye mhinduro dzekuongorora.
1. III inobatsira sei kuderedza mari uye kuderedza mari yakawanda yezvinhu zvekutengesa kweI IT?
ICHIMWARI uye vashandi vanopedza matanho avo emabasa sezvo basa risina kubhadharwa rinodiwa pane basa rakarongeka. ITIL inoita kuti masangano amise urongwa uhwu uye anopa vamiririri kuti vafunge pamusoro pezvikamu zvakakwana zvezvinhu uye mamwe mabasa munzvimbo yavo yeunyanzvi.
2. Ndiani anogona kukwanisa kurongeka kwechinangwa chinorongwa mukati meIITIL inopindirana neChirongwa cheKushandura?
Chisarudzo chinowanzotorwa neChinja Mutungamiri. Anovimbisa kuti hutano hunozadzisa zvinangwa zvavo mukati nepamunogona napo nekushandisa zvishoma kuburikidza nekuwedzera kushanda kwevashandi uye kushandiswa. Anonyanya kufunga nezvekuchinja kune bhizinesi, maitiro emabasa, zvigadziro uye zvishandiso uye masangano ekubatana.
3. Chii chinonzi chiitiko chinoitwa mushure mekuchinja kwave kuchiitwa kunonzi?
Kuongorora kunodanwa Post Implementation Review (PIR). Ichi ndicho chiongorudzo uye kuongororwa kwegadziriro yekushanda. Izvo zvinoitika mushure mokugara mararamiro, mune dzimwe nguva mushure mekuguma kwekushanda. IPIR inotarisa kukwana kwegadziriro yekufambisa mberi mushure mekugadziriswa kwave kuri mune zvisikwa zvekusika kwemwedzi mitanhatu.
4. Ndeipi nzira ye ITIL inoita kuti sangano rizive nezvekutsva nekuvandudzwa kwezvinhu zvitsva?
Capacity Management inotsigira kuti sangano rinoramba richifunga nezvekushanduka kwezvinhu zvitsva. Icho chinosimbisa kuti IT inogadziriswa inosvika panguva yakakwana mumutauro wakarurama paine mari yakakodzera nekubudirira kunoshamisa.
5. Pachinzvimbo chakanaka kuti Mutariri weDhipatimendi Rebasa anoda kusimbiswa pamusoro pekunge mukati mechipatimendi reDesk Desk chinopindura sei kukwanisa kuwanda kwemafoni mukati me10 seconds, mune ripi musangano weDhipatimendi reBasa rekuda kwechinhu ichi chichanyorwa?
Kune chibvumirano chinonzi chibvumirano chekushanda kwepamusoro (OLA) chinoratidzira kuti zvakasiyana sei zvinyorwa muSangano rinoronga kutaura basa kana urongwa hwemashumiro. Inotarisirwa kuchengetedza nyaya dzeItara dzekuchengetedza nekuratidza urongwa hwezvinotarisirwa uye hutano hweT IT hunoitwa nehofisi yose.
6. Ndeapi mapato maviri eUtungamiri hweKushandisa anoshandisa nzira yekugadzirisa uye kuongororwa kwenjodzi?
Iyo miviri miitiro iyi IT Service Continuity Management uye Availability Management.
7. Tsanangurirai mazwi MaPortfolio, Service inventory uye service pipeline.
Service portfolio: Izvi zvinoratidzira hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hu Basa rePortfolio Management rinoshandisa purofidho yebasa. Inovimbisa kuti mubatsiri webasa ane mabasa ekusangana nemigumisiro yebhizimisi inokosha pamwero wepamutemo wekufungidzira.
Nhamba yebasa: Iyi ichinyorwa chePortfolio. Inorondedzera maitiro akagadzirirwa kupiwa kune vatengi. IT inoshandiswa index inonyora kuwanikwa kwezvinhu zvitsva uye zvipo zvechikwata.
Pipeline yebasa: Inosanganisira maitiro ari kushandiswa. Inotaura nezvemasaisai emangwana ayo uye kuburikidza nekushandiswa nemushandi webasa.
8. Tsanangura CMIS, AMIS uye KEDB.
Capacity Management Management framework (CMIS): Iro urongwa hweHS hwunyanzvi hwekushandisa, hushandisi uye hutano huripo hwakaunganidzirwa uye hunoiswa mune imwe nheyo dzemashoko.
Accessibility Management Information framework (AMIS): Icho chiri chivharo chezvinyorwa zvose zveAvailability Management Information rinoiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Dedhi rekukanganisa rinozivikanwa (KEDB): Chinhu chakazivikanwa chinokonzerwa nenyaya yakanyatsofambisa mutyairi uye basa rakapoteredza. Zvimwe zvikanganiso zvakavanzika zvekukanganisa zvakanyorwa mune imwe nhoroondo yavanonyanya kushandiswa.
Inorayirwa kuenda kuIIT kudzidziswa kuitira kuti vanhu vari kutsvaga vawane mukana wekubatana nevadzidzisi vadzidzisi uye pamwe chete nemiganhu yakawedzera chidzidzo chevo ruzivo. Chengetedza Basa Rakanaka Mukutevera Kuita ITIL Certification.